Axmed Village “Waxaa weerar igu haya Maqaayado Ajnabi ah oo raba inay banaanka iiga saaraan….” - Hablaha Media Network
Axmed Village “Waxaa weerar igu haya Maqaayado Ajnabi ah oo raba inay banaanka iiga saaraan….”
HMN:- Ganacsade Axmed Jaamac oo loo yaqaano Axmed Village oo ah milkiilaha maqaayada caanka ah ee The Village ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay soo fara geliso xaalad ka taagan Xerada Xalane, halkaasoo Maqaayad uu ku leeyahay lagu haayo weerar ganacsi.
Axmed Village ayaa sheegay in dalka uu yimid sanadkii 2008-kii, tan iyo xilligaas ka qeyb qaadanayay horumarka iyo nabada caasimada, isagoo shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro fara badam
Waxaa uu sheegay in illaa 150 dhalinyaro ay u shaqeeyaan, kuwaasoo 64 ka mid ah ay hal meel ka shaqeeyaan, waxaa uu xusay in hal abuurkaas ganacsi ee uu la yimid ay maanta rabaan dad doonaya inay ku ciriiriyaan ganacsigiisa.
Axmed Village ayaa sheegay maqaayadiisa ay tahay tan kaliya ee Soomaali ee ku taala xarunta Xalane ee agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, sababta uu tallaabadan u sameeyay ay tahay inuu tuso dhaqanka untada Soomaaliyeed.
Waxaa uu sheegay inuu dhibane u yahay xaaladaha dalka ka jira, isla markaana dhowr jeer dhibaatooyin ka soo gaareen qaraxyo lala eegtay maqaayadaas, xitaa uu xaaskiisa ku waayay.
“Maqaayado Ajnabi ayaa weerar ganacsi igu haya, oo raba inay tartan ila galaan, waxaana ley sheegayaa awood siyaasadeed iyo mid amni, waxaa weerarkaas igu haya maqaayado Talyaani iyo Koofur Afrikaan ka furan Xerada UN-ka”ayuu yiri Axmed Jaamac oo la rabo in ganacsigiisa banaanka la dhigo.
Mr Axmed Village ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in arrintan wax ka qabato, waxaana si gaar ah fariin ugu diray Wasaaradaha Amniga, Arrimaha Gudaha, Ganacsiga, Dalxiiska.
Fariin dhowaad ay soo saareen Gudi amni oo hoos taga Qaramada Midoobey ayaa shaqaalaha UN-ka waxay uga digeen isticmaalka Maqaayada Village ee ku taala Xarunta Xalane, waxaa ay tilmaameen in maqaayadan ay dhowr jeer waxyeelo ka soo gaareen qaraxyo ka dhacay banaanka garoonka, taasna ay ugaga digayaan shaqaalaha arrimo amni darteed.